Amparafaravola : Nosokafana ny bankin’ny masomboly -
AccueilRaharaham-pirenenaAmparafaravola : Nosokafana ny bankin’ny masomboly
22/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Havokavok’ i Madagasikara tokoa raha ny faritra Alaotra Mangoro no resahina, indrindra ny lafin’ny fambolem-bary. Nijery manokana ny vahoaka Amparafaravola noho izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina taorian’ny fampanantenana izay nataony tamin’ny vahoaka, ary tanteraka izany omaly. Eo amin’ny lafin’ny fambolena izao, dia nisedra olana ny tantsaha mpamboly vary noho ny tsy fahampian’ny ranon’orana, ka antony naha kely ny vokatra sy somary nampakatra ihany koa ny vidiny. Ankilany, ny masomboly izay fototry ny fambolena dia nahitana fiakarany noho ny fiakaran’ny sandam-bola malagasy hoy ny tompon’andraikitry ny orinasa SCAA, izay mpamokatra sy mpanafatra masomboly. Ireo antony ireo ihany koa no nanainga ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina hijery akaiky ny olan’ny tantsaha ao Amparafaravola, sy nitondra vahaolana ihany koa. Anisan’izany ny fanamboarana sy ny fanadiovana ny lakan-drano 60 kilometatra ao Antanambe, izay efa dimy ambin’ny telopolo taona izay tsy nisy nanamboatra, ary toraka izany ihany ny tao Ampilaona izay efa ho dimampolo taona tsy nahitana fanamboarana, nefa dia tena herin’ny fambolena, ary manondraka tanimbary amina hektara maro sy ahazoan’ny vahoaka an’aliny maro tombontsoa.
Ankoatra izay ihany koa, dia nambaran’ ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa tsy vita hatreo ny fanatsarana amin’ny ahazoana vokatra maro, satria dia efa andalana izao ny fanajariana ny lemak’Alaotra Mangoro ao Iranja, izay hiarahana amin’ny firenena Japonais. Ho an’ny lemak’i Lovoka kosa indray, dia hisy ny fametrahana sy fanamboarana toho-drano izay hizara ny rano ho an’ireo tanimbary 700 hekitara, ka mpamboly hatrany amin’ny telo arivo no hahazo tombony ao amin ny kaominina Imerimandroso.
Eo amin’izay lafin’ny fanampiana ny tantsaha izay ihany, dia tsy nohadinoin’ny filoham-pirenena ny nanampy ireo tantsaha, sy nitondra vahaolana maharitra eo amin’ny izay olana amin’ny masomboly izay. Noho izany dia ravo sy faly tokoa ireo tantsaha, satria dia notoloran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina masomboly milanja 20 taonina, izay tsy haverina velively. Eo amin’ny vahaolana lavitr’ezaka kosa, dia notanterahina omaly ny bankin’ny masomboly, izay ahafahan’ireo tantsaha mindrana; ka rehefa miakatra ny vokatra dia averin’izy ireo izany, ka arakaraka ny velaran-tany hananan’izy ireo no ahafahana mampindrana, satria tokoa ho an’ny tanimbary iray hekitara, dia masomboly 30 kg no ampiasaina, Noho ireo fanampiana ireo dia tazana teny amin’ny endrik’ireo tantsaha indray ny hafaliana sy ny tsiky, satria dia afaka tokoa ny fahasahiranana ho azy ireo. Mba hahamaro ny asa fambolena dia nambaran’ ny filoham-pirenena omaly àry, fa hapetraka ao Morarano Chrome ny orinasa malagasy izay mpamokatra zezika araka izay filan’ny tantsaha. Izay efa vita ny 40 isan-jaton’ny trano, ary ny faran’ny volana desambra ho avy izao no ho vita tanteraka ny asa. Izao no natao hoy ny filoha dia noho ny efa fihazakazahana eo amin’ny lafin’ny fampandrosoana avokoa.
Mba ahafahana manatanteraka ny asa fampandrosoana sy ny lafin’ny fambolena, dia ilaina vatana tomady izany; noho izany dia notokanan’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimpianina ihany koa ny trano fandidiana vaovao izay manaraka ny fenitra takiana. Io trano fandidiana io anefa dia efa nisokatra ny volana aogositra noho nyfilan’ny mponina, satria teo aloha dia voatery mandeha lavitra ireo marary izay mila fitsaboana, ka mamonjy any Ambatondrazaka sy Antananarivo. Mitentina 386 369 264 Ar ny teti-bidin’ny asa fanamboarana, izay volam-panjakana madiodio izany. Hatreto ihany koa dia miisa 108 ny fandidiana efa natao, ary 130 ireo izay niteraka tao amin io hopitaly ao Amparafaravola io. Ankoatra ny asa efa vita moa dia nonolotra kidoro miisa 12 ny filoham-pirenena ho an’ny hopitaly, ary eo ihany koa ny fitaovana ahafahana manatanteraka fitsirihana, na ny Echographie ary vata fampangatsiahana, izay hisy anjaran’i Tsaratanàna ihany koa. Raha ny zava-nisy tao Amparafaravola omaly dia tsikaritra ny asa fampandrosoana izay mivantana amin’ny vahoaka, satria dia notoloran’ny filoham-pirenena fitaovana maro ny kaominina toa ny Tract Opel roa, fiara mpamonjy voina, fiara be na kamiao ben , melangeur ary Ambulance clinique sy Ambulace. Ireo fitaovana ireo, izay nambaran’ ny filoham-pirenena fa natao indrindra ny hiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro, ary ahafahana ihany koa mijery ny fanamboaran-dalana. Ankoatra izany dia nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ihany koa fa andeha tsy ho ela ny fanamboaran-dalana ao vohidiala. Anisan’ny nangatahan’ny vahoakan’Amparafaravola tamin’ny filoha ny mikasika ny fahazoana rano fisotro madio, teo noho eo ihany ny valinteny nomen’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa hotanterahina izany, ary rehefa ny filoha no miteny dia ho tanteraka izany. Ankoatra izany dia nampanantenain’ny filoha ny vahoaka ihany koa ny fanamboarana ireo CSB II miisa roa sy ny toho-drano ahazoana herinaratra. Mba ho firaisan-kinan’ny filoha tamin’ ireo vahoaka kosa dia nisy ny fanolorany omby miisa roa ho an’ny vahoakan’ Amparafaravola.
Tafiditra indrindra amin’ ny fihomanana sy fanomanana ny fifidianana ny fanatanterahana ny fivoriamben’ ny RECEF (Le Réseau des Compétences Electorales Francophone) eto Antananarivo, izay nanomboka omaly hatramin’ny faha-22 ny volana martsa ho avy izao. Ny ...Tohiny